Passportka dadka ka yimid Soomaaliya iyo 29 wadan oo kale oo lagu qorayo (ukjent) meesha dhalashada - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Passportka dadka ka yimid Soomaaliya iyo 29 wadan oo kale oo lagu...
Passportka dadka ka yimid Soomaaliya iyo 29 wadan oo kale oo lagu qorayo (ukjent) meesha dhalashada
Wasaarada cadaalada iyo dastuurka Norwey ayaa bishii sedexaad ee sanadkan go aamisay in qofka codsanayo passport cusub ee ka yimid 30 wadan oo ay Soomaaliya ka mid tahay loogu qori doono (ukjent) meesha dhalashada(fødested), maadaama aan la xaqiijin karin meesha ay ku dhashay qofkaas. Sababo la xiriira nidaamka dowliga ee wadamadaas oo ah mid tabar-daran, isla markaana aan lagu kalsoonaan karin . Arintan ma khusayso dadka wadanka ku cusub ee kaliya balse waxay khusaysaa dhamaan dadka ka yimid wadamadaas, xitaa hadii aad 30 sano degenayd Norwey oo aad codsanayso passport cusub oo norwiiji ah, waxaa meesha uu qofka ku dhashay laguugu qori doonaan (ukjent). Caruurta ku dhalatay Norwey, iyaga ma khusayso maadaamala folkeregisterka laga heli karo cadeymaha dhalashadooda ee Norwey.
Dadka qaar codsaday passportka ayaa sheegay in waraysi dheer lala yeeshay markii ay tageen xafiisyada police-ka si ay u cusbooneeyaan passporkooda. Arintaas oo keentay in dadka qaarkood oo dhalashada wadanka haystay waqti dheer ay dareemayaan in shaki iyo muran la galiyo shaqsiyadooda isla markaana lagu abuuro wel-wel aan horey u jirin.
Arintan ay go aamisay wasaarada cadaalada iyo dastuurka Norwey ee uu madaxda ka yahay Anders Anundsen oo ka tirsan xisbiga FRP ayaa keentay in cabsi iyo wal-wal ay lasoo gudboonaato dadka ka yimid wadamadaas ee codsanayo passportka Norwey. in (ukjent) lagu qoro meesha uu ku dhashay qofka, waxay keenaysaa in laga shakiyo asal ahaanta qofka, taas oo keeni karta in uu qofku dhib kala kulmo marka uu marayo garoomada diyaaradaha ee wadamada kale, ama uu codsanayo viso wadan kale. Go-aankan ayay wasaaradu ku dhaqaaqday iyada oo aan ogaysiin dadka ay khusayso ama aan lagala tashan dhibaatada iyo cawaaqibta ka imaan karto.
Dadka ay khusayso arintan ayaa waxaa kamid dadka ka yimid wadamada: Burkina Faso, Burundi, Den Demokratiske Republikken Kongo, Ekvatorial Guinea, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Mali, Nigeria, Republikken Kongo, Sierra Leone, Somalia, Uganda, Zimbabwe, Afghanistan, Filippinene, India, Irak, Jemen, Myanmar (Burma), Pakistan, Saudi-Arabia, Sri Lanka, Vietnam iyo Kosovo.
Ururka la dagaalanka cunsuriyada iyo faquuqa ee Antirasistisk Senter ayaa warqad ay ku codsanayso in arintaas wax laga qabto u dirtay wasiirka cadaalada iyo dastuurka Norwey, maadaama ay tahay in xadgudub iyo takoorba ku ah dadka ka yimid wadamadaas ee shaki la galinayo asalkooda.
Xigasho: Antirasistisk Senter iyo Politi.no
Previous articleQoys caruurtoodii dib u helay dagaal dheer kadib
Next article40 qodob oo ay Sylvi Listhaug rabto inay ku adkayso sharciga qoxootiga oo baarlamaanka looga doodaya: kuwee ugu muhiimsan